UEFA Oo Baareeysa Dhacdadii ‘cunsiriyadda’ ee Arnautovic – Garsoore Sports
UEFA Oo Baareeysa…
Xiriirka kubbada-cagta qaaradda Yurub ee UEFA aya baareeysa dhacdadii Marko Arnautovic kulankii ugu horreeyay ee xulkiisa Austria Euro 2020 iyadoo weeraryahankan uu u dabaaldegay si aan caadi ahayn kaddib markii uu gool ka dhaliyay Waqooyiga Macedonia.
Arnautovic ayaa dhaliyay goolkii ugu dambeeyay ee kooxdiisa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee guushii 3-1 ay ku gaareen Bucharest kaddib markii uu beddel kusoo galay cayaartii Axadda ee Group C.
Warbaahinta ayaa sheegtay in 32 jirkaan uu debaaldeg ahaan hadalo toos ah u jeediyay ciyaartoyda kooxda kasoo horjeedday iyadoo kabtanka Austria David Alaba uu u muuqday inuu isku dayayay inuu dajiyo ninka ay dhalashada wadaagaan.
Xiriirka kubada cagta ee Macedonia ayaa warqad rasmi ah u gudbiyay UEFA iyagoo ka dalbanaya ciqaabta ugu daran ee la mariyo kaddib iyagoo ku tilmaamay “xanaaq wadaninimo” oo loo geeystay cayaaryahan Ezgjan Alioski, oo asal ahaan kasoo jeeda Albania.
Arnautovic, oo isna asal ahaan ka soo jeeda Serbia, ayaa war qoraal ah oo uu soo dhigay baraha bulshada Isniintii ku sheegay inuu raali gelin ka bixinayo “hadalada kulul”.
Serbia ma aqoonsana madaxbanaanida gobolkeedii hore Kosovo, halka xiisad taariikhi ah ay kala dhexeyso Waqooyiga Macedonia.
Navas Oo Lala Xiriirinayo United, Juve Iyo Milan